Roobab ka da'ay magaalada Hadaaftimo ee Gobolka Sanaag oo Khasaare Geystey
Hadaaftimo:- Maalintii shaleyto ahayd ayaa waxaa magaalada Hadaaftimo ee Gobolka Sanaag ka da'ay roobab dabeylo wato oo khasaaro lixaadleh geystey iyadoo roobabkaasi ay baabi'iyeen Guryo tiradoodu gaareyso ilaa iyo 20 Guri oo inta badan Guryahaas ay dabeyshu ka qaadatey Saqafyadoodii.
Sida aanu xusney khasaaraha ilaa hada la xaqiijiyey ayay waxay yihiin in ilaa labataan guri waxyeelo soo gaadhay kuwas oo kala khasaare badan iyadoo ay badan yihiin guryaha uu hinqiyey saqafkooda iyo kuwo daadku soo galay wixii hoos yiilayna la tegay ama qooyey .
Guryaha ugu liitey ama ugu khasaaraha badnaa oo uu saqafka ka qaaday gidaaradana wax yeelo weyn u geystay ayaa waxay kala yihiin.
1-Maxamed Abokor aadan
2-Axmed Sahal Ducaale Yare
3-Maxamed Xirsi Jaamac
5-Carab Yuusuf Daad
6-Aadan Xaaji Cabdi
7-Ilma Maxamed Cali Huruuse
8-Ilma Axmed Aadan Nuur
9-Faadumo Ismaciil Maxamed.
Waxaa kaloo jira in xoolo badan uu magaalada kala tegay kuwaas oo ahaa kuwii magaalada lagu haystay, iyadoo miyiga aanaan hayn weli wax khasaare ah oo naloosoo sheegay.
Waxaa intaa dheer iney jiraan khasaare soo gaaray korontada iyo telefoonada oo layman badan ka jaray magaalada iyana hada lagu mashquulsan yahay sidii adeegii bulshada dib loogusoo celin lahaa arintaas oo ay heegan u yihiin shaqaalaha labada shirkadood ee Maakhir iyo Golis telecom Hadaaftimo.
SAWIRO KALE HOOS EEG....
Maxamed Cabdi Sadexle, (Geelreeb)